Faah Faahin kasoo baxeysa qarax ka dhacay deegaanka Jasiira | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Faah Faahin kasoo baxeysa qarax ka dhacay deegaanka Jasiira
Faah Faahin kasoo baxeysa qarax ka dhacay deegaanka Jasiira
Muqdisho (Halqaran.com) – Qaraxaan ayaa waxaa uu ka dhacay xeebta deegaanka Jasiira ee duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan bar koontarool oo ku leeyihiin halkaas ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda federaalka.
Hal askari oo ka tirsan ciidanka Booliska ee ilaaliya xeebta deegaanka Jasiira ayaa ku geeriyooday qaraxaas oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso, waxaana ka hadlay qaraxaas maamulka Jasiira.
Guddoomiyaha deegaanka Jasiira Xuseen Jilacow Aadan oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in qaraxa uu ka dhacay goob ay ku sugnaayeen ciidanka amniga deegaanka, uuna ku dhintay hal askari, isla markaana uusan jirin khasaaro kale.
Qaraxa dhacay ayuu ku eedeeyay inay ka dambeeyeen Al-Shabaab, waxaana guddoomiye Xuseen Jilacow uu sheegay in howlgal ay sameeyeen lagu qabtay laba qof oo looga shakiyay ku lug lahaanshaha falkaas, ayna ku socdaan baaritaano.
Sidoo kale guddoomiyaha deegaanka Jasiira ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu tilmaamay in howlgal lagu xaqiijinayo amniga deegaanka ay halkaas ka wadaan ciidanka Booliska dowladda federaalka.